Andry Rajoelina : Manosihosy ny Lalàm-panorenana -
AccueilSongandinaAndry Rajoelina : Manosihosy ny Lalàm-panorenana
Andry Rajoelina : Manosihosy ny Lalàm-panorenana
Mbola tsy lany ho Filoham-pirenena dia efa mandika lalàna sahady. Izany no zava-mitranga ankehitriny, sy ny ataon’ny kandidà Andry Rajoelina nitondra ny laharana faha-13 tamin’ny biletà tokona tamin’ny fifidianana fihodianana voalohany, ny 7 novambra teo.
Tsy mbola nivoaka akory mantsy ny voka-pifidianana taorian’ny latsa-bato ny andron’ny fifidianana dia efa nisora-tena ho lany Filoham-pirenena ny tenany nanoloana ireo mpomba azy, teny amin’ny amin’ny foiben-toerany, teny Ambatobe ny alin’ny androm-pifidianana teo.
Izany indrindra no nanambaran’ny avy amin’ny kandidà iray tamin’iny fifidianana iny fa tsy manara-dalàna ary manosihosy tanteraka ny Lalàm-panorenena ingahy Andry Rajoelina. Tsy vitan’izay fa mametaveta ny lalàm-pifidianana mihitsy. Nambaran’ny talen’ny fampielezan-kevitry ny kandidà Marc Ravalomanana, Rabenja, fa fandikan-dalàna ny misora-tena ho lany amin’ny fifidianana mialoha ny famoahana ny vokatra ôfisialy, na inona na inona voka-pifidianana eo am-pelan-tananao. “Izy ihany anefa no nametraka ny Lalàm-panorenenan’ny Repoblika Fahefatra, izay mitondra ny fiainan’ny firenena”, hoy ity talen’ny fampielezan-kevitry ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, ity.
Raha ny marina, amin’ny maha kandidà Filoham-pirenena an’ingahy Andry Rajoelina, izy no tokony ho maodely sy filamatra amin’izany fanarahan-dalàna izany. Izany hoe, ireo izay nirotsa-kofidiana hitantanana ny firenena rehetra dia tokony manana toetra mendrika izany Filoham-pirenena izany ary maodelin’ny vahoaka entiny amin’ny fanarahan-dalàna fa tsy hitarika azy ireo amin’ny lalan-diso indray ka hamarina an-kady.
Noho izany, famitaham-bahoaka ny nataon’i Andry Rajoelina amin’ny filazana fa fihodianana voalohany (1er Tour) dia vitany ny lalao ary izy no Filoham-pirenena mandritra ny fe-potoam-piasana voatondro.
Araka izany, fanodikodinana ny saim-bahoaka ara-politika iny nataon-dRajoelina iny ary mendrika fandraisan’andraikitry ny tompon’andraikitra mahefa izany. Hatreto anefa, tsy mbola hita sy tsapa izany fandraisan’andraikitra izany nefa dia mibaribary fa fandikan-dalàna no nataon’ingahy Andry Rajoelina.